124800lm 5000K 960W Bụrụ Iju Mmiri China Manufacturer
Nkọwa:Mmiri Iju Mmiri dị elu Brazil,Led Stadium Light 960W,Mmiri Igwe Mmiri Mmiri 960W
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu n&#39;èzí > 124800lm 5000K 960W Bụrụ Iju Mmiri
Ihe Nlereanya.: BB-LD-960W-Q
Power: 90-99W, 960W
✔ 130 LUMENS PER WATT - Nke a elu mmepụta n'èzí ikanam Stadium ìhè 960W nwere ọnụ nke 124,800lumens. Ebube elu mmiri dị elu 5000K na-egbuke egbuke dị mma maka ịmalite nnukwu ụlọ egwuregwu, ebe ndị egwuregwu na egwuregwu dị ka ụlọ nchịkọta basketball, ụlọ tennis na ebe bọl, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ buru ibu.
✔ IP67 RATED - Nke a buru ibu na-eme ka ihe nkedo na-egbuke egbuke 960W nwere njedebe ntinye nke 66, nke pụtara uzuzu na-egbochi ma na-egbochi ya imikpu mmiri. Ihe a na-eme nke ọma n'èzí a na-eme ka ọ bụrụ ihe ntinye na ntinye akwụkwọ IP67 na-eme ka ntinye gị dị na ya.
✔ 50,000 HOURS & EFFICIER ENERGY - Egwuru egwu 960W na -eduzi ebe a na-eji nkà na-emepụta ihe na-eme ka ọ kwụsị ruo awa 50,000+, na-ewepụ mkpa ọ dị iji dochie ihe ntanye gị. Site na dochie HIP / HID / MH bulbs / fixtures na 3000W LED ị na-ebelata ego eletrik gị ruo 80%.
✔ NTỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ - na- egosi na ọ zutere ihe ndị ha chọrọ na ihe ndị dị mkpa na nchebe mba.
✔ Enyemaka afọ ise - Anyị na - ewepụ ihe ize ndụ ahụ iji hụ na afọ ojuju gị. Eji afọ ise na-enweghị njedebe nke BBIER nyere gị kpuchie! Kpọtụrụ anyị maka ngbanwe ngwa ngwa na ngwa ngwa.
edu egwuregwu egwuregwu ìhè 450W egwuregwu egwuregwu Kpọtụrụ ugbu a
N'èzí ikanam Stadium Light 960W Kpọtụrụ ugbu a
300Watt LED Stadium Flood High Mast Light 5000K Kpọtụrụ ugbu a
300W N'èzí Arena Iju Mmiri Kpọtụrụ ugbu a
500W LED Tennis Tennis Light Fixtures 5000K 65000LM Kpọtụrụ ugbu a
Iju Mmiri Iju Mmiri 500W 65000lm 5000K Kpọtụrụ ugbu a
n'èzí 300W ada iju mmiri ìhè 5000K Kpọtụrụ ugbu a
Ugbo ụgbọala na-adọkpụ n'èzí 500W kpatara iju mmiri Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri Iju Mmiri dị elu Brazil Led Stadium Light 960W Mmiri Igwe Mmiri Mmiri 960W Mmiri Iju Mmiri dị elu nke 600W Mmiri Iju Mmiri nke Iju Mmiri Mmiri Iju Mmiri azụ Mmiri Iju Mmiri Amazon Mmiri Iju Mmiri Stadium